कस्तो रह्यो ट्रम्प–किम भेटवार्ता ?
काठमाडौं, २९ जेठ – अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनबीचको भेटघाट सिंगापुरमा मंगलवार एकअर्काको हात मिलाएर शुरू भयो ।
ट्रम्पले वार्ता अत्यधिक सफल भएको र किमसँग आफ्नो सम्बन्ध गजबको हुने बताए ।
ट्रम्पको छेउमा बसेका किमले अनुवादकमार्फत भने, ‘यो विन्दुमा आइपुग्न सजिलो थिएन । पुराना अभ्यास र पूर्वाग्रहहरूले हाम्रा आँखा र कानहरू छोपिएका थिए तर हामीले सबै बाधा हटाउन सफल भएका छौं ।’
बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताबीचको पहिलो बैठकमा दुवैजना एकअर्का नजिक पुगे र हात मिलाए । अनि उनीहरू नमुस्कुराइकन क्यामरातर्फ फर्किए । हात मिलाएको १२ सेकेन्डसम्म ट्रम्पले किमलाई केही भनिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
अनि किमले अंग्रेजीमा भनेको सुनियो, ‘म तपाईंलाई सिंगापुरमा भेट्न पाउँदा खुशी छु ।’ त्यसो भनिरहँदा ट्रम्पले किमको हातमा थपथपाए ।
ऐतिहासिक हातमिलाइ क्यापेला होटलमा अमेरिकी र उत्तर कोरियाली झण्डाहरूको अगाडि सुसम्पन्न भएको थियो ।
अग्लो छत भएको कोलोनेड हुँदै किम र ट्रम्प हिँडिरहँदा किम सहज अनुभव गरिरहेका थिए । उनी मुस्काए र केही भनेजस्तो देखिए ।
कोलोनेडको पुछारमा किमले ट्रम्पलाई अनुवादकमार्फत भने, ‘धेरै मानिसले यसलाई एक स्वैरकल्पना, एक विज्ञानकथाका रूपमा बुझ्नेछन् ।’
त्यसपछि दुईजना होटलको पुस्तकालयमा रहेको कफी टेबलको दुईतिर बसे अनि अनुवादक राखेर एकान्तवार्ता गर्न थाले । उनीहरूका सहयोगी वा सल्लाहकारहरू सँगै थिएनन् ।
उनीहरूबीचको बैठक ४८ मिनेट चल्यो र त्यसपछि बाल्कोनीसम्म हिँडेर पुगे र प्रतीक्षारत प्रेसलाई हात हल्लाए । बैठक कस्तो भयो भनी सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘एकदमै गजब । गजबको सम्बन्ध ।’
यी दुवै नेताका लागि उच्चस्तरीय वार्ता उनीहरूकै जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बैठक हो । यसले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार कार्यक्रमको भविष्य र कोरियाली युद्धको अन्त्य गर्ने शान्ति सम्झौतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
परमाणु हतियारको भन्दा पनि अत्याधुनिक अस्त्रको डर, के गर्छन् शक्तिराष्ट्र ?
मोदीले ट्विटर ह्यान्डलमा गरे परिवर्तन, नाम राखे चौकीदार नरेन्द्र मोदी
कांग्रेस प्रवेश गरेको ३ दिनमै नेता चौरसियाको हत्या